समाचार - विन्डशील्डको साथ सवारी गर्दा के फाइदा हुन्छन्?
विन्डशील्डको साथ सवारी गर्दा के फाइदा हुन्छन्?
COMFORT: WIND सुरक्षा!
हावा संरक्षण विन्डशिल्ड्सले तपाईंको अनुहार र छातीमा हावा विस्फोट हटाएर थकान, कम्मर दुखाइ, र पाखुराको तनावलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। कम हावा तपाईंको शरीरको विरुद्ध धकेल्छ, अधिक आरामदायक र रमाईलो सवारीमा परिणाम दिन्छ।
हाम्रो विन्डस्क्रीन्सको अनौंठो लाइन विशेष रूपले डिजाईन गरीएको छ र तपाईं र तपाईंको यात्रीबाट टाढो उडाएको वायुलाई बदल्नको लागि ईन्जिनियर गरिएको छ। कम अशांति अधिक आराम र अधिक माईल बराबर।
यदि तपाईं काठीमा केहि घण्टा भन्दा बढी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, विन्डशील्डले दिनको अन्त्यमा लाभांश तिर्नेछ।
COMFORT: गर्मी संरक्षण!
मौसम संरक्षणवादी छक्क पर्दैन कि विन्डशिल्डले सुख्खा, तातो अशांत हवालाई पनि बदल्छ, चिसो चिसो हावा पनि बदल्छ।
वर्षा वा चमक, एक विन्डशील्डले मौसमलाई माध्यमिक विचार बनाउँदछ जब दुई पाels्ग्रामा सडकमा हिर्काउँदा। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं घरबाट 500०० माईल - वा अधिक - र तपाईंसँग समय, पैसा वा सुख्खा, न्यानो मोटेल कोठामा वर्षाको दिन खर्च गर्ने लक्जरी छैन।
कम्फर्ट र रमाइलो सधैं पहिलो आउँछ। न्यानो र सुक्खा रहन तपाइँको सवारी को समय विस्तार गर्दछ र तपाइँ अधिक माइल सुरक्षित रूपमा कवर गर्न दिन्छ।
सुरक्षा: डेब्रिस संरक्षण!
आईबीएक्स विन्डशील्डहरू र फेयरि windहरू हावा संरक्षण र बढ्दो सवारी सुविधा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो, तर अर्को गाडी, जनावर, वा अन्य कुनै वस्तुसँग टकराव हुने अवस्थामा सुरक्षा होइन।
त्यहि मात्र, यसले हामीलाई ठूलो आनन्द दिन्छ जब हामी सवारहरूबाट पत्रहरू पाउँछौं जुन हाम्रो विन्डशिल्डको सामर्थ्यको प्रमाणित गर्दछ, चराहरू, बल पिन हथौड़ा र हिरणहरूसँगको असरमा!
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दैनौं तपाईंको पोइन्ट प्रमाणित गर्न सवारी हुँदा तपाईंसँग एक साथीले हथौड़ा टस गर्नुभयो। तर यदि केहि मैत्री तपाईंको सड़कमा आउँछ र तपाईं एक मजबूत विन्डशील्ड छैन भने, तपाईं वास्तव मा इच्छा छ तपाईं एक थियो।
फिचर गरिएका उत्पादहरू - साइटम्याप कावासाकी स्कूलब्याग र्याक, Vespa Gts 300 Gtv लगेज र्याक, फ्ल्याट मोटरसाइकल पेडलहरू, मोटरसाइकल ग्यास पेडल, होंडा Nmax विन्डशील्ड, Vespa Gts Gtv 300 Schoolbag र्याक,